गिरिराज भट्टराई – Page 10 – सप्तरंगी एफ एम
Home / Author Archives: गिरिराज भट्टराई (page 10)
झापाको गौरादहबाट क्रिकेटका उत्कृष्ट तिन खेलाडी छनौट
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ४/ झापाको दक्षिण क्षेत्र गौरादह नगरपालिका बाट क्रिकेट खेलका लागी खेलाडीहरु छनौट भएका छन् । नेक्सस युथ लिग काठमाण्डौको लागी गौरादह क्षेत्रबाट ३ जना खेलाडी छनौट भएका हुन् । ग्रेट हिमायलन एकेडेमी काठमाण्डौले उत्कृष्ट खेलाडी विराज तामाङ, मौषम चापागाई, वेन्जामिन खत्रीलाई छनौट गरेको हो । लाली गुरास क्रिकेट एकेडेमी केर्खामा भएको क्रिकेट छनौट खेलबाट २४ खेलाडीहरु मध्य ...
गौरादह डिपुचौकलाई व्यवस्थीत गर्न डिपुचौक सुधार समिति गठन
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ४/ झापाको गौरादह नगरपालिकाको डिपुचोक वरपरको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले डिपुचोक सुधार समिति गठन गरिएको छ । गौरादह बजार तथा डिपुचोक क्षेत्र सांघुरो भएको साथै व्यवस्थित पार्किङस्थल नहुँदा सर्वसाधारण बाट गुनासो आइरहेको भन्दै समिति गठन गरिएको हो । बसाइसराइका कारण दिन प्रतिदिन जनसंख्याको चाप थपिदै जादा अव्यवस्थित पार्किङ बढेको छ । गौरादहको डिपुचोक तथा बजार क्षेत्रमा घर ...
१२ बर्षिया बालिका बलात्कारको आरोपमा दमकबाट एक युवा पक्राउ
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ४/ बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा दमकबाट एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका ६ घर भई हाल दमक नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा डेरा गरी बस्ने २५ बर्षीय दिपक धमला रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र एक्तेनका अनुसार धमलाले हिँजो राती साढे ८ बजे सोही स्थान बस्ने ...
दमकको पाणीनी माविमा छात्रबृत्ति र प्रोत्साहन पुरस्कार बितरण तथा बिबिध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ४/ दमक वडा नम्बर ९ मा रहेको पाणिनी माध्यमिक बिद्यालयले आज छात्रबृत्ति र प्रोत्साहन पुरस्कार बितरण तथा बिबिध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दमक नगर उप प्रमुख गिता अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बिद्यालयमा स्थापित दुर्गा देवी काफ्ले प्रोत्साहन कोष, स्वर्गिय भिष्म काफ्ले स्मृति कोष, स्वर्गिय ज्ञानमायाँदेवी दाहाल स्मृति कोष, स्वर्गिय दुर्गादेवी खड्का स्मृति कोष, सुरज ...